Madaxweynaha Jabuuti oo Waraysi laga Qaaday arimo badan kaga hadlay – Radio Daljir
Madaxweynaha Jabuuti oo Waraysi laga Qaaday arimo badan kaga hadlay
Juunyo 2, 2015 3:29 b 0
Talaado, Juun 02, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar geele: Waan diidnay Ikhwaanul-muslimiin, Iiraan boos uma hayno, Xizbullaah iyo Xuuthiyiintana waa Fitno-wadayaal.
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo wareysi gaar ah siiyay jariirad laga leeyahay dalka Sacuudiga oo lagu magacaabo Alxayaat ayaa si weyn u weeraray Ururka Ikhwaanul muslimiin, Dowlada Iiraan, Ururka Xizbullaah iyo weliba ururka Ansaarullaah Alxuuthi.
Madaxweyne Geele oo xilliga wareysiga laga qaadayay ku sugnaa magaalada Paaris ee caasimadda dalka Faransiiska ayaa ka hadlay arimo badan oo xassasi ah, waxaana ka mid ahaa wax yaabihii uu soo hadal qaaday Kacdoonadii sanadahan dambe ka socday dunida Carabta oo uu ka deyriyay.
Geele iyo Guga Carbeed:
Mdaxweyne Geele ayaa si weyn u cambaareeyay kacdoonadii sanadihii ugu dambeeyay ka socday dunida carabta ee loogu magacdaray “guga carbeed” waxuuna ku tilmaamay dib u dhac ku habsaday dunida carabta.
” Hadeysan jiri lahayn isbarbartaaga dowlada Sacuudiga isbarbartaagtay shucuubta carbeed, waxaa burburi lahaa dowlada badan oo carbeed” ayuu yiri madaxweyen Geela oo dowlada Sacuudiga ku amaanay dowrki ay ku lahayd arimahan, asaga oo tusaale u soo qaatay dowladaha Masar iyo Lobnaan oo uu sheegay in Alle ka sokow Sacuudiga badbaadiyay.
Geele iyo Ururka Ikhwaanka:
Madaxweyne Geele oo soo hadal qaaday ururka Ikhwaanul-muslimiin, ayaa sheegay in marka laga soo tago dalka Masar, in ururka Ikhwaanka xafiiskii ugu horeeyay ka furteen dalka Jabuuti, sanadkii 1930-kii.
Geele waxuu sheegay in inbadan dowladaha Khaliijka uu weydiistay caawimaad ku wajahan sidii looga hortagi lahaa Ururka Ikhwaanka iyo ururada la midka ah, waxuuna sheegay in boqorkii hore ee Sacuudiga Boqor Cabdalla bin Cabdil Casiis uu hormuud u noqday fulinta codsiga Jabuuti, islamarkaana uu qaaday olole Jabuuti loogu qoondeeyay aduun dhan 200 oo malyuun oo doolarka Mareeykanka ah, si loogula dagaalamo Ururka Ikhwaanka iyo Ururada la midka ah.
(Mr Geele ma magac dhabin kuwa ay yihiin Ururadan uu sheegay in ay lamidka yihiin Ikhwaanka.)
Geele iyo Dowlada Iiran, Xizbullaah iyo Xuuthiyiinta:
Madaxweyne Geela ayaa faragelinta ururadan ee dalalka Suuriya, Ciraaq iyo Yaman ku tilmaamay Fitno aad u weyn, waxuuna ururadan ku sifeeyay “askar Iiraan soo dirsatay”.
Madaxweyen Geele aya calaaqaadka Iraan iyo dalkiisa ku tilmaamay mid aad u xun, waxuuna yiri, waxaan iska ilaalinaa shartooda. Geele ayaa sheegay in ujeeda Iiraan tahay, siday u qabsan lahayd marinka lagu magacaabo “Baabul-Mandab” iyada oo adeegsaneysa maleeshiyada Xuthiyiinta dalka Yaman.
Geele iyo C/Fataax Al-siisi:
Madaxweyen Geele ayaa amaanay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al-Siisii oo uu sheegay in uu soo celiyay waxuu ugu yeeray “muhiimadii dalka Masar ku lahaa qaaradda Afrika”, taasoo uu sheegay inay xoojisay calaaqaadka Masaarida iyo dalkiisa.
Uhuru Kenyatta iyo Musavani oo kawada hadlay la dagaalanka Al-shabaab